Ikhaya - Insights
Yonke ingane nomuntu omusha banelungelo lokuhlinzekwa ngempumelelo esikoleni.
Izidingo zezempilo zomphakathi, ezingokomzwelo nezingokwengqondo zinganqotshwa ngohlelo lokufunda olwenzelwe umuntu ngamunye, olubandakanya futhi nolusha.
Ukusebenza ngokubambisana nomphakathi obanzi kuthuthukisa ulwazi lwabafundi / lwabafundi bethu.
Ikharikhulamu yethu isekela abafundi / abafundi ‘ukuze babe ngabafundi abaphumelelayo, izakhamizi ezinokwethenjelwa kanye nabantu abasha abanempilo, abazethembayo abangaba negalelo elihle emphakathini.
Okuhlangenwe nakho okuhle, okubandakanya bonke abafundi kunomthelela enhlalakahleni yabafundi / yabafundi kanye nasemiphumeleni emihle yokuphila.
Abafundi bethu banelungelo lokuxhaswa nokuholwa yithimba lochwepheshe abazinikele, abanozwela nabanekhono.
Buka Ukuvakasha Kwesikole